HETSIKA FARAN’NY HERINANDRO : Anjaranao sisa no misafidy izay metimety aminao
Hahazo laka etsy amin’ny Jao’s Pub Ambohipo
Taorian’ny fiverenan’i Lion Hill sy Chriso avy tany amin’ny Nosy La Réunion dia hampifety ao amin’ny Jao’s Pub Ambohipo izy ireo anio, manomboka amin’ny 9 ora alina. Samy haneho ny talentany ireto mpanakanto mivoy ny gadona Rnb ireto, mandritra io alim-pandihizana io. Hiangalian’i Lion Hill ho an’ireo tonga hanotrona azy ireo kanto indrindra amin’ny hirany izay ahalalan’ny maro azy, toy ny “Ataova tonga agny” sy ny “Zana-jovy” amin’io fotoana. Mpanakanto avy any amin’ny Faritra Atsinanana ny tovolahy ary nanomboka ny taona 2015 teo no tena nampisongadina azy io teo amin’ny sehatry ny mozika. Tsy ho latsa-danja ihany koa ny “Nisy fofony” sy “Reharehako” hiarahana amin’i Chriso. Vao roa taona monja izay no nahitana sy nandrenesana ny tovolahy eny amin’ireny haino aman-jery maro samihafa ireny. Hafana araka izany ny toeram-pilanonana etsy Ambohipo ity amin’io fotoana io.
Hitondra ny talentany etsy amin’ny Piment Café Behoririka i Samoel a
Hampiala voly ireo mpankafy azy etsy amin’ny Piment Café Behoririka i Samoela anio, manomboka amin’ny 9 ora alina. Hitondra ny hira an-gitara amin’ny alalan’ny vazo miteny ity mpanakanto efa fanta-daza amin’ny sehatry ny mozika ity. Amin’io seho takariva miavaka io no handrotsirotsiny ireo mpankafy vazo miteny ho tonga “hanal’azy” miaraka amin’ity mpanakanto tena manana ny lazany manokana ity. Mampanantena ambiansy ho an’ireo rehetra ho tonga ny mpikarakara.
Mpanakanto tsara feo indrindra hanafana ny Le Glacier Analakely
Mpanakanto tsara feo indrindra no nitondran’i Jazz Mmc ny seho takariva hotontosainy, etsy amin’ny Le Glacier Analakely anio. Hanolotra ny tsara sy meva ho an’ireo tonga hanotrona azy i Jazz Mmc amin’ity seho takariva izay hanomboka amin’ny 9 ora alina ity. Ny Gwetta sy coupé decalé no hanjaka eny an-toerana mandritra ny alim-pandihizana. Tsy ho latsa-danja ihany koa ireo mpankafy ny hiram-pitiavana satria miangaly izany ny tovolahy. Tsy voafetra ny fotoana amin’io fa mandra-paharainan’ny andro.
CA S’DIT BIEN DIT
Hankalaza ny faha herintaonany ny Vondrona etsy amin’ny Bonara-be chez Sa-yah 67 ha
Mpanakanto maro avy any amin’ny sisin’ny Nosy sy eto afovoantany no hanafana ny fankalazana ny tsingerin-taona ny Vondrona “ça s’dit bien dit” anio, etsy amin’ny toeram-pilanonana Bonara-be chez Sa-yah 67 ha. Hanomboka amin’ny 8 ora alina ny alim-pandihizana karakarain’ity vondrona ity. Hahazo laka ny salegy hiarahana amin’i Ninie Donia mpanjakavavin’ny Salegy, etsy ankilany i La’Sainte hitondra ny Rnb hanomezany fahafaham-po ireo tanora mpankafy izany. Lous’Fah sy ny vazo miteny mivantambantana hampahatsiaro ny “Zah juste zah” izay tena nahitana an’ity mpanakanto voalohany teo amin’ny sehatry ny mozika. Hiaka-tsehatra hitondra ny “Mampijaly jean” izay tsy afaka am-bavan’ny maro ankehitriny koa I Gangstabab. Hanasongadina ny talentany mandritra izany ihany koa i Espérance, Ariane, Ludovic Vanina ary i Joackim Mickael. Ambiansy tropikaly tanteraka no hanjaka amin’io fotoana io ary tsy voafetra ny ora fa mandra-paharainan’ny andro.
Ifanihy hampiala voly ireo mpankafy
Ela tsy tazana. Hitondra hetsika ho an’ireo mpankafy azy etsy amin’ny Amitie Fandian 67ha i Ifanihy anio, manomboka amin’ny 9 ora alina. Seho takariva natokan’ity mpanakanto zokiny ity hitondrana vazo miteny. Fantatry ny mpankafy azy fa sady miangaly izy no mitendry ihany koa. Fantatra tamin’ny tononkira hoe “Le Sabotsy” ny mpanakanto tamin’ny fiandohany ary tena nampalaza azy io tokoa ny famoahany izany. Hanohy ny fanomezany fahafaham-po ireo mpanara-dia azy hatramin’izay ny mpanakanto amin’ity seho takariva hotanterahiny ity. Mampanantena ambiansy ho an’ireo mpankafy azy hatrany i Ifanihy sy ny mpikarakara.
Hampiara-peo etsy amin’ny Karibotel Twenty Six 26 i Njila sy Lilie ary Mahery
Mpanakanto telo samy mivoy ny gadona milamindamina na ny ba gasy sy vazo an-gitara no handrotsirotsy ireo mpankafy. Anio manomboka amin’ny 9 ora alina ny lanonana hiarahana amin’i Njila, Mahery sy Lilie. Tazana matetika eny amin’
ireny seho takariva eto an-drenivohitra izy telo mianadahy efa fanta-daza eo amin’ny sehatry ny mozika ireto tato ho ato. Njila dia manana ny maha izy azy eo amin’ny fitendrena gitara ankoatry ny fahaiza-mihira. Mahery kosa dia matetika ny mampiara-peo amin’ireo mpanakanto maro efa fanta-daza no ahafantarana azy io. Hiaka-tsehatra hiangaly ny hira fampiaraham-peon’izy roa i Mahery sy Lilie amin’io fotoana.
Hivoaka ny rakikira “Tsisy Clé”
Eo am-piketrehana ny rakikira vaovao “ Tsisy Clé” ny gropy Dasara amin’izao. Rakikira fahaefatra io ary ahitana ireo karazana hira maneho, ny tontolon’ny fitiavana sy ny fiainana andavanandron’ny vahoaka Malagasy. “Efa masaka ny nahandro ary nisy ezaka lehibe natao tamin’ity rakikira fahaefatra ity satria dia fanakaikaizana ny fon’ny mpakafy no novokarina ao sy atolotra azy ireo. Hivoaka tsy ho ela io rakikira io”, hoy Dasara, izay mpihira no sady mpamorona sy mpandrindra ny hira ao amin’ny tarika. Hira 15 no hita ao ary hita ao avokoa ny gadona rehetra, toy ny Zouk Love, Salegy, kilalaky, Reggae sy ny Sega. Manana ny talentany eo amin’ny hira sy mozika ny tarika ka hasehony amin’ny variété izany. Nanomboka ny taona 2008 no tafajoro ofisialy ny tarika ary vokatra tsara eo amin’ny kanto no azon’izy ireo tao anatin’izany. Tsy afaka ao am-bavan’ny mpakafy ireo hira rehetra mampalaza azy ireo toy ny “Vola”, “Ny sipa tsy maintsy mi-roule”, “ Angela”, “Fero omby” sy ny maro hafa koa. Nanamafy ny fampanantenana feno ireo mpankafy rehetra ny tarika fa amin’ny taona 2018 io dia seho matihanina maro no hotanterahina ao amin’ny Faritra Alaotra Mangoro. Izay fiavian’ny tarika ary hisy ihany koa ny fitetezam-paritra.